Chiyangwa assaulted in SA – NewsDay Zimbabwe
WINDHOEK — Namibia Football Association secretary general, Barry Rukoro again courted controversy for violent conduct after allegedly assaulting Cosafa president, Philip Chiyangwa in South Africa on Friday.
Previous article Soldier loses service pistol in nightclub
Next article FC Platinum’s Caf dream shattered
Pfidza nesasi yake ndofunga akataurira Rukoro kuti gara pasi hauna kana cash!! Manje chokwadi chakadai chinorovesa.
Mdara fodza hamunganzarwo mhani mfana uyu muratidzei kut makangwara munorwa necash kwete nemaoko
Phidza wakajaidza nasekuru dictator wakakaura wish u more of such face the real world of suffering ar the hands of muscle flexers
Comment… Mdhara fidza dzidza pamuonde kuti mazuva atokwana rohwa tiende kkkkkkk cash haishandi apa usanyeperwe
Phidza hapana kwaanoenda, next CAF president.
PANGA PASANGANA VANHU VANE PRIDE VESE, OLD HORSES TOO NGAVACHIZORORA.
kurohwa kuratidza kuti pane zvisina basa zvakataurwa.mari haikunde chokwadi